Sexy V လည်ပင်းတွင်ပခုံးကြိုးတစ်ချောင်း Ladies Bikini Set |
❀Modelသည် SMALL ၀ တ်ဆင်သည်။ အရမ်းအသင့်လျော်စွာအလုပ်လုပ်သည်! သင်အားလျော့သောစတိုင်ကိုကြိုက်လျှင်ပိုကြီးသောအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
less နောက်ကျောတွင်မပါ ၀ င်သည့်ရေကူးဝတ်စုံတွင်ဝတ်ဆင်ထားသော spaghetti ကြိုးများ၊ ဖယ်ရှားနိုင်သောခွက်များနှင့်ပွင့်လင်းသောနောက်ကျောများပါ ၀ င်သည့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော v-neckline ပါ ၀ င်သည်။
animal ခေတ်မှီသောတိရိစ္ဆာန်ပုံနှိပ်ပုံစံနှင့်အစိုင်အခဲရှိသောအရောင်အားဖြင့်၎င်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည့်စတိုင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် timeless v-neck silhouette နှင့်အပိုင်းအစတစ်ခုနှင့်သင်မှားယွင်းစွာမသွားနိုင်ပါ!
your ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး sunnies နှင့် ဦး ထုပ်တစ်ခုထပ်ထည့်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်ပြီးပြည့်စုံသောနွေရာသီကမ်းခြေကြည့်ရှုရန်အဖုံး၊ ကဒ်နီယမ်၊ ကီမိုနိုနှင့်နေကာမျက်မှန်တို့ဖြင့်စတိုင်ကျနိုင်သည်။ ဤလှပသောသွင်ပြင်သည်နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးချစ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
beach ရေကူးဝတ်စုံအမျိုးသမီးများသည်ကမ်းခြေ၊ ရေကန်နှင့်အပန်းဖြေရန်နေရာ၊ အားလပ်ရက်၊ အပန်းဖြေစခန်း၊
ရှေ့သို့ အပြည့်အဝစီထားသည့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး ပါ ၀ င်သောဖြတ်တောက်မှုရေကူးဝတ်စုံ Tummy Control Monokini
နောက်တစ်ခု: Smooth High Cut ခြေထောက်ပြတ်သောထိုင်ခုံဖုံးလွှမ်းထားသည့်အမျိုးသမီး ၀ တ်ရေချိုးကန်တစ်ခု
နူးညံ့သောချည်မျှင်များနှင့်ခြေထောက်ချည်မျှင်များစီးမျောခြင်းကင်းသော Litt ...
Stretchy အထည်အလိပ်အပြည့်အဝလွှမ်းခြုံ Non See-Throu ...
အမျိုးသမီးများအားကစားရုံ Yoga S ကို ၀ တ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်အသက်ရှူနိုင်သောအဆင်ပြေသော ...